Arovy amin’ny homamiadana ny vatana…misotroa jus karaoty sy mananasy
Tsy fahita loatra ny ranom-boankazo amin’ny mananasy sy ny karaoty indray miaraka. Azo atao soa aman-tsara anefa izany ary mampalefaka ny tsirony aza ny fanampiana tamotamo amin’izany ranom-boankazo izany. Ankoatra ny hatsaran’ny tsirony dia mahasalama ity ranom-boankazo ity.
Akora ilaina (ho an’olona 2)
Karaoty amin’ny habeny antonony 4
Vovoka tamotamo 1 sk na vaingana tamotamo mirefy 1,5 sm
Voasana ny karaoty ary voasana toy izay ihany koa ny tamotamo raha vaingany no ampiasaina.
Voasana ihany koa ny mananasy ary esorina ny taolany.
Rehefa voatetika ireo akora rehetra ireo dia miaraka alefa ao anaty “mixeur” ary miaraka potserina ao.
Sotroina avy hatrany raha vao vita.
Ø Manamafy ny hery fiarovana ao anatin’ny vatana ity ranom-boankazo ity ka miaro amin’ny aretina samihafa indrindra fa ny homamiadana.
Ø Hiara-mahalala fa ny karaoty dia tsara ho an’ny maso. Ny fifangaroany amin’ireo akora hafa ireo anefa dia vao mainka manamafy izany.
Ø Tena tsara ihany koa ity ranom-boankazo ity raha sotroina mialoha ny hisakafoana satria manamora ny fandevonan-kanina.